युगसम्बाद साप्ताहिक - राजनीति गर्ने व्यवसायी हैन योगी बन्नुपर्छ
Monday, 01.20.2020, 11:44pm (GMT+5.5) Home Contact
राजनीति गर्ने व्यवसायी हैन योगी बन्नुपर्छ
Wednesday, 05.31.2017, 01:52pm (GMT+5.5)
नेपालमा राजनीतिलाई पेशा बनाइएको छ । यथार्थ त के हो भने राजनीति गर्नेहरू कर्मयोगी बन्नुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक नेताले नित्य गीतापाठ गर्नुपर्छ जसबाट उसको बुद्धि विकसित भएर राम्रो काम गर्ने क्षमता आउँछ । कुनै नीति र मानवताको अनुभव नभएका व्यक्ति राजनीतिमा खेल्न थाले भने ती सुविधाभोगी भएर स्वार्थसिद्धिमा लाग्छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । त्यस्तामा कुनै किसिमको रचनात्मक दृष्टि हुँदैन र काम गर्नलायक मनस्थिति पनि तिनीहरूमा हुँदैन । राजनीतिक पुरुषको उद्देश्य जनतालाई सुखी र सुरक्षित बनाउने हुनुपर्छ । प्राचीन राजाको काम जनतालाई सेवा र सुरक्षा प्रदान गर्ने थियो । तर आजको सिथति विपरीत दिशामा गैरहेको छ ।
दलीय राजनीति एक अत्यन्त जटिल तत्व हो । यसमा राष्ट्रप्रेमभन्दा पनि दलगत अन्धविश्वासले बढी काम गरेको हुन्छ । दलगत झै–झगडामा शक्ति खेरजान्छ र मानिस जुवाडे जस्ता हुन्छन् । त्यसैले विश्वमै प्रचलित दलीय राजनीतिमा संशोधन आउनु आवश्यक छ । अहिले निर्वाचनको सन्दर्भ छ र यसमा उम्मेदवारहरुको चर्चा हुने नै भयो । वास्तवमा पर्याप्त सामाजिक कर्म नगरेको र त्यसको अनुभूति नै नभएको व्यक्तिलाई उम्मेदवार नै बनाउनु हुँदैन । हरेक दलले जनताका अगाडि गएर आफ्नो प्रचारको ढ्याङ्ग्रो ठटाउनु बुद्धिमान नागरिकका लागि गाइजात्रा हो, आफूतिर ग्राहक तान्न पसलेले गरेजस्तै तमासे प्रदर्शन गर्नु हो । त्यस्ता प्रचारले जनताको अवमूल्यन गर्छन् । को कस्तो हो भन्ने जनतालाई थाहै छ भने कानमा बाजा बजाउनु जनतालाई मूर्ख ठह¥याउनु हो । त्यस्ता बाजामा लट्ठिने व्यक्ति मतदान गर्न लायक पनि हुँदैनन् ।
मान्छेले अरुलाई देखाउन जस्तोसुकै अभिनय गरे पनि आखिर उसको वास्तविक स्वरुप व्यवहारबाट प्रकट भैहाल्छ । आफूलाई मात्रै सक्कली प्रजातन्त्रवादी, लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी, स्वतन्त्र या समाजसेवी आदि जुनसुकै आवरणमा राखे पनि त्यस्ता अधिकांशको आचरणमा तानाशाही प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यस्ताहरूले ऐन, कानुन, नियम, आचार–विधि मिचिरहेका हुन्छन् र त्यस्ता नियम, विधि अरुलाई मात्र लाग्ने र आफूले पालन गर्न नपर्ने ठान्दछन् । तानाशाही प्रवृत्ति भनेको त्यस्तै नै हो । त्यस्तो प्रवृत्ति विशेष गरेर दलीय नेतृत्व तहमै देखिनाले त्यसको उपचार पनि माथिल्लै तहबाट सुरु भए मात्रै, नत्र असम्भव प्रायः भैसकेको छ ।
मान्छेले भन्न थालेका छन्– कहाँ छ यहाँ प्रजातन्त्र ? प्रजातन्त्र त त्यहाँ हुन्छ जहाँ मान्छे निर्भय भएर सुख, शान्तिसंग बाच्न पाउँछ । प्रजातन्त्र त्यहाँ हुन्छ जहाँ जनताको जीउ धनको सुरक्षा हुन्छ, वातावरण स्वतन्त्र हुन्छ र एकले अर्कालाई सहयोग गर्छ । के आज नेपालीले आफूलाई सुरक्षित ठान्नसक्ने वातावरण र परिस्थिति छ ? कुन बेला कसले कसलाई अपहरण गर्छ, लुट्छ र मार्छ भनेर अहोरात्र जगजगीमा, त्यो पनि अपराधीकै निगाहमा बाँच्नुपरेको अवस्थालाई कसरी प्रजातन्त्र भन्न मिल्छ ? नेपाली जनताले चाहेको आजकै जस्तो आतंकपूर्ण व्यवस्था हो ? जनता अब मालिक भए भनेर घोक्रो सुकुञ्जेल कराउने नेताहरूसंग के छ यी प्रश्नको जवाफ ? छैन । देखिएकै छ– प्रजातन्त्र शब्दले पनि नपुगेर नानाथरि तन्त्र फलाक्ने उनीहरूको स्वभाव र व्यवहार अरुलाई अँठ्याउने र आफू मात्रै उठ्ने तानाशाही चरित्र एवं स्वार्थी मानसिकता ।
देशलाई प्रगतिको बाटोमा अघि बढ्न आवश्यक पर्ने मूलतत्व शान्ति सुरक्षा हो । शान्ति सुरक्षा नै सरकारको प्राथमिक दायित्व हुन्छ । तर यहाँ नेताहरूलाई केवल कुर्सीको चिन्ता छ, देश र जनताको वास्ता छैन । आज राज्य जनताको होइन, अपराधीको भएको छ । अपहरण, फिरौती, हत्या सामान्य भएका छन् । बाँच्न मन हुनेले अपराधीले भनेको मान्नुपर्ने भएको छ । सरकारको लाचारी र निरीहताले गर्दा अपराधकर्मीको हौसला बढ्दो छ । उर्लदो महंगी खपिनसक्नु छ । अड्डा अदालतहरूमा भ्रष्टाचार खुला छ । स्कूल–कलेज, नर्सिङ होमहरू स्वीकृति प्राप्त लुटका अखडा बनेका छन् । अशान्ति र असुरक्षाका कारण कलकारखाना बन्द छन् । मान्छे मारिन्छन्, तर अपराधी समातेर कार्बाही गर्नुसट्टा सरकार मृतकका परिवारलाई पैसा दिएर कर्तव्य पूरा भएको सम्झन्छ ।
स्वघोषित ठूला नेताका अकर्मण्य र अक्षमता स्पष्ट भएको छ । नेता भनेको जनाधारबाट खारिएर बन्ने चीज हो । आज जनाधार–जनविश्वास हराइसकेको छ । कामकाज र क्षमता केही नभए पनि हल्लाका भरमा नेता बनेकाहरूले देश जोगाउँछन् भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ नै समाप्त भएको छ । बाजले परेवा गाँजे झैं र गिद्धले सिनो लुछेझैं देशका सिमाना प्रतिदिन लुछिरहेकोतर्फ कुनै पनि नेता या मन्त्रीलाई वास्ता भएको देखिंदैन । उनीहरूलाई त जसरी भए पनि विस्तारवादीलाई आफ्नो पक्षमा पारेर कुर्सी जोगाउन पाए देशको सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोत साधन सुम्पन पनि गाह्रो छैन जस्तो छ ।